UI iray: interface vaovao an'ny Samsung miaraka amina endrika vaovao | Androidsis
UI iray: interface vaovao an'ny Samsung
Ity valan-dresaka ho an'ny mpamorona izay karakarain'i Samsung ity dia tsy namela antsika fotsiny amin'ny fampidirana ny findainao. Ny sonia dia mamela antsika zava-baovao vaovao iray hafa, izay tonga amin'ny endrika interface tsara. Hatramin'ny orinasa koreana nanolotra tamin'ny fomba ofisialy One UI, ny interface vaovao sy havaozina. Izy io no mpandimby ny Samsung Experience, izay miorina amin'ny Android Pie ankehitriny. Ny famerenanana ny orinasa amin'ity sehatra ity.
Ity interface vaovao avy any Samsung ity dia miavaka amin'ny lafiny roa. Ny UI iray dia manasongadina endrika madio kokoa ary ho mora ampiasaina kokoa ho an'ireo rehetra manana telefaona marika. Ka fiovana lehibe ho an'ny orinasa izany.
Araka ny nolazain'ny orinasa tamin'ity famelabelarana ity, teraka ny UI iray izay manana ny hevitra hoe manamora ny lahasa tena ampiasainay amin'ny finday avo lenta. Ka ny fampiasana telefaona dia mora kokoa ho antsika, saingy izany rehetra izany nefa tsy very safidy amin'ny fampiasana azy. Ka tsy ho very safidy sy fiasa isika fa hanamorana ny fidirana amin'izy ireo.
1 UI iray: interface izay hiova
UI iray: interface izay hiova
Izy io angamba no lafiny nanintona ny saina indrindra tamin'ny fiandohan'ity interface Samsung ity. Izy io dia interface interface iray miova, izay hanome fahafaha-manao betsaka. Izany dia azo tanterahina amin'ny fomba roa, satria amin'ny lafiny iray dia ho azo atao ny manangona ireo safidy fanamboarana. Etsy ankilany, azontsika atao ny manamboatra ampahany tsy ilaintsika hanjavona.
Ny UI iray dia ho interface tsy miova foana. Rehefa tsy mila entana ny mpampiasa dia hesorina izy ireo. Ny lakileny dia mifantoka amin'ny zavatra ataon'ilay mpampiasa amin'ny fotoana iray izy io, hisorohana izay mety ho fanelingelenana mety hitranga amin'io fotoana io. Ny fifantohana amin'ny lahasa dia iray amin'ireo teny filamatrany.
Lafiny iray tokony horesahina koa ny hoe namboarina indray ny interface sy ny rindranasa. Ankehitriny, mifanaraka tsara amin'ny fomba fampiasantsika ny findaintsika izy ireo. Ao amin'ny tapany ambony amin'ny rindranasa iray dia ahitantsika ny atiny ary ny faritra ambany amin'ny telefaona dia ny afaka mifampiresaka. Zavatra izay lojika, satria ny tapany ambany dia izay ananantsika ny rantsan-tanantsika rehefa mandray ny finday amin'ny tanana iray isika.
Samsung dia naneho ny mety ho fisehon'ireo hafatra amin'ny One UI vaovao, araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony. Ao amin'ny faritra ambony ihany no hasehony azy ireo, raha amin'ny faritra ambany kosa dia ho afaka hampita ny lisitry ny hafatra isika, ankoatry ny hetsika na fiasa hafa. Ny hevitra dia ny fampiasana ny rindranasa ho an'ny mpampiasa ho intuitive kokoa.
Ny menus amin'ny telefaona na amin'ny fampiharana dia haseho eo ambanin'ny efijery.. Amin'ity tranga ity, ny menus rehetra dia tafiditra ao, toy ny menio ara-nofo rehefa manatanteraka safidy iray, izay miseho matetika eo amin'ny faran'ny efijery. Mbola ho eo amin'ny farany ambany izy io, ary ambany kokoa aza izao.
Vaovao tsara ho an'ny mpampiasa fa handeha ny UI iray manome safidy azo ampanjifaina. Samsung dia naka ity lafiny ity amin'ny kaonty. Afaka manova ny lokon'ny interface amin'ny fomba tsotra isika, satria nampiseho mivantana ny orinasa tamin'ny kaonferansa. Ka azo ahitsy arakaraky ny fampiasana antsika io.
Ny maody maizina dia tonga amin'ny UI iray, toy ny efa hita tamin'ilay hetsika. Azontsika atao ny mampandeha ity maody maizina ity, mba hahafahan'ny rindran-telefaona mampiasa feo fotsy na mainty. Izy io dia maody maizina amin'ny haavon'ny interface interface, izay misy fiantraikany amin'ny interface rehetra.
Araka ny nohamafisin'i Samsung, UI iray no hanomboka amin'ny Janoary 2019 ho an'ny telefaona findainy sasany. Ny Galaxy S9, S9 + ary ny Galaxy Note 9 dia handray azy amin'ity volana ity. Alohan'izany dia hanomboka fotoana fitsapana amin'ny tsena sasany ny orinasa. Hatreto i Alemana, Japon ary Etazonia dia voamarina amin'ity lafiny ity, na dia hatao any amin'ny firenena maro any Eropa aza ny fitsapana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » UI iray: interface vaovao an'ny Samsung
MIUI 10 dia misy amin'ny telefaona Xiaomi mihoatra ny 30 izao